अव बढारिने पालो राजा फाल्ने कांग्रेसको
हरेक जिल्ला लालकिल्ला
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वीपीवादलाई प्रचण्डपथमा मिसाएको विषवृक्षमा मंसिर १० र २१ को निर्वाचन परिणामको फल फल्ने भएको छ । प्रचण्ड जनआन्दोलनमा मिसिएर कांग्रेसका माध्यमबाट राजतन्त्र समाप्त पारे, अव तिनै प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा लागेका छन् । देशैभरि एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरु यसरी लागेका छन् कि अव कांग्रेसका लागि तिन्केका सहारा खोज्ने बेला आएको छ । समयमै नेपाली कांग्रेसले हिन्दु र राजावादीसँग मिलेर वीपीवाद जगाएनन् भने नेपाल लालकिल्ला बन्नजानेछ भने कांग्रेस बहुलाउने स्थितिमा पुग्नेछ । कांग्रेसका थिंक टेंक छन् भने तिनले प्रजातन्त्रलाई लतारिनबाट जोगाउने बेला यही हो ।
काठमाडौं । अव कसैले शंका नगरे हुन्छ, समाजवादको आवरणमा कम्युनिजम कि प्रजातन्त्रको नाममा नेपाली कांग्रेस, नेपाल यही निर्वाचनबाट दुई धारे राजनीतिमा ध्रुविकृत हुनेछ । चुनावी माहोल यस्तै देखिदैछ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कम्युनिष्टतन्त्र कि प्रजातन्त्र ? भन्ने मुद्दामा केन्द्रित हुनथालेको छ ।
माओवादी र ससाना कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई मिसाएको एमालेको धुवाँधार प्रचार देख्दा, सुन्दा लाग्छ– जिल्लामात्र होइन, सिंगै मुलुक लालकिल्ला भइसक्यो । जुनसुकै क्षेत्रका उमेदवारहरु भनिरहेका छन्– हाम्रो जिल्ला लालकिल्ला हुन्छ । प्रजातन्त्र त एमाले र माओवादी उमेदवारको मुखमै छैन । भन्छन्– वामपन्थी समाजवादतिर उन्मुख छौं, समाजवाद पनि भन्न नपाउने ?
यो सबै चर्तिकलाको राज्यरिपोर्ट दिनदिनै हेरेर र शासन गरिरहेका र प्रजातन्त्रको बिडा उठाउने हामी हौं भन्ने कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुखै खोलेर भन्नुपर्‍यो– कम्युनिष्टहरु जिते भने प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ, रुन पनि पाइने छैन । के त्यसो भए नेपालमा कम्युनिजम चुनावको माध्यमबाट कम्युनिजम जन्मिनै लागेको हो त ? हुन त हिटलर पनि चुनावबाटै जन्मेका थिए, के भन्न सकिन्छ र ?
अहिलेको चुनाव कम्युनिजम कि प्रजातन्त्र ? निरंकूशता कि उदारवाद, विकास कि विध्वंश ? यस्ता मुद्दाहरु पनि आम विषय बनेका छन् ।
खतरा के पनि छ भने कम्युनिष्टहरुको बलमा क्रिश्चियन बढेका छन् र क्रिश्चियनको समर्थन एमालेलाई छ, कम्युनिजम कम्युन्यालिजम बढाएर भोटबैंक आफूतिर तानिरहेको छ, कांग्रेसलाई निर्वाचनको मतले बढारेर वामपन्थीहरु एकछत्र राज्य गर्ने योजनामा तल्लीन देखिएका छन् । र, जसरी जनआन्दोलनमा माओवादी मिसिनासाथ सडकमा सलहजसरी जनता निस्केका थिए, त्यस्तो त होइन, तर लहर एमालेमा बढेको अनुभव जो कसैले गरेका छन् ।
दक्षिण एसियामा कम्युनिष्टको बलशाली परिदृश्य नेपालबाट देखिदैछ । अहिलेको चुनावी माहौल, जनसमर्थनको लहरले शक्ति सन्तुलन बिग्रेर शक्तिको एकतर्फीकरण पो हुनजाने हो कि भन्ने विश्लेषकहरुको चिन्ता छ । वामपन्थीले दुई तिहाई सिट जित्यो भने संविधानसमेत परिवर्तन हुने र प्रजातन्त्र खतरामा पर्नेछ । शेक्सपियरकति दूरदर्शी चिन्तक थिए, जसले म्याग्वेथ र डंकनको कथा लेखे ।
राजा डंकनको विश्वासपात्र व्यक्ति थिए म्याग्वेथ । तर असाध्यै महत्वाकांक्षी थिए म्यागवेथ । एकदिन राजा डंकन थाकेको स्थितिमा म्यागवेथको घरमा आए । म्यागवेथका दम्पत्तिले उनलाई यति खातिरदारी गरेर ख्वाए, पिलाए कि राजा डंकन बेहोस हालतमा लम्पसार परे ।
त्यसपछि म्यागवेथलाई श्रीमतीले कायर, के हेरिरहेको, छुरा धस, सिध्याइदेउ भनेर उक्साइन् र म्यागवेथले राजा डंकनलाई छरा धसे । पीडाले चिच्याउँदै राजा डंकनले भने– म्यागवेथ तिमी पनि...।
वीपी मूर्ख थिएनन्, उनले राजतन्त्र र र प्रजातन्त्रलाई साथै लानुपर्छ भनेर जीवन गुजारे । तर गिरिजाप्रसादका पालामा प्रचण्डले गिरिजालाई राष्ट्रपतिको सपना देखाएर राजा सिध्याउने उक्साए र गिरिजाले २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर राजतन्त्र सिध्याइदिए । आज राजावादीहरु भन्छन्– कांग्रेस तिमी पनि...। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन्, उनी आज राजाको थान्कोमा छन् र म्यागवेथ बनेका छन्, ओली । प्रचण्डको सन्काहटमा ओलीले कांग्रेसलाई सिध्याउने प्रपञ्च तैयार पारेका छन् । अवको केही दिनमै राजा डंकनको हालतमा नेपाली कांग्रेस पुग्नसक्ने अनुमान धेरैको छ । कांग्रेसले अक्किल लगाउला कि ?
यद्यपि कांग्रेस अझै कम्युनिष्टले भनेजस्तो देश लालकिल्ला नहुने सपना देखिरहेको छ । हेर्नु यत्ति छ, नेपाली कांग्रेस राजतन्त्रको सति जान्छ कि जादैन ?
बुद्धिमानहरु पढेर सिक्छन्, अनुभवीहरु परेर । कांग्रेसले बाह्र हण्डर खाइसकेको छ । माओवादीलाई सत्तामै राखेर प्रतिपक्षी मान्नुपरेको छ । कम्युनिष्टहरु एक भइसके, लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेजस्तो दर्विलो हुनसकेको छैन, यो स्थितिमा हिन्दु र राजावादी मिलाउन नसके कांग्रेस त सिद्धिन्छ त ?